Psychology and Relationships Rudo
Kunyangwe zvinodiwa zvevanhu zvakasiyana, isu tose tiri kutsvaga nzira yedu pachavo kune imwe chinangwa: kunzwa unodiwa uye kuda. Chakavanzika chehukama hwakanaka ndechokuita zvakananga pakati pe "kutora" uye "kupa." Muchikamu chino tichafunga: chii chinonyanya kukosha muhukama hwakanaka, sei ungaita kuti zvive zvakanaka uye kuchengetedza kwemakore anotevera.
Chii chinonyanya kukosha muukama hwakanaka?
Rudo pachako. Kufunga nezvenzira yekuita ukama nemudiwa wako zvakanakisisa, kutanga kwezvose, chengorora munzira dzauri iko zvino iwe pachako. Usavhiringidza kuzvidzora nekudyire, zvinoreva kuti une chimwe chinhu chokugovana nevamwe. Kana iwe usingazvida iwe pachako, haugoni kufara. Kana iwe usingafari, haugone kupa mufaro chaiwo kune mumwe munhu. Kana iwe ukararama chete vadiwa, usingafungi nezvako, saka rudo runomhanyira njodzi yekudhakwa. Hazvikwanisi kuva muenzaniso wehukama hwakanaka.
Kuzvimirira. Mutemo uyu unotevera kubva kune wekutanga. Pamwe iwe unofunga kuti kuzvimiririra ndiko kusava nebasa. Asi chaizvoizvo, iyi ndeimwe rudzi rworusununguko: kuziva kwezvakakwana zvehupenyu hwehupenyu (rusununguko kubva kumhosva dzekukundikana kwevamwe) uye, sechikonzero, chido chekuzvikudziridza. Mukuwedzera, mutemo unotevera wehukama hwakanaka hunotevera kubva kuzvimhuru.
Kuremekedzana. Kunyange kana rudo rukuru ruchidzoka zvishoma nezvishoma, kuremekedzana kunogona kuita zvishamiso. Murumbidze kwaari iwe uchadzivisa kukakavadzana kwakanyanya, kunoderedza hukama, iwe uchakwanisa kuteerera uye kubatsirana.
Kuvimba uye kuvimbika. Izvi zvichange zvisingabatsiri kuparadza simba rorudo pamusana pekufungira nekutsamwa. Uyewo inopa chivimbo, zvakakosha kuitira ukama hwakanaka.
Kuda kuchinja. Mafungiro ehukama hwakanaka ndiko kunzwisisa kuti mudikanwa anogona kungoshandurwa nenzira imwechete - nokuzvishandura. Mushure mezvose, mafungiro ake pamusoro pako inoratidza mafungiro ako pachako.
Kunamata kweukama hwepedyo. Uyu unhu hunovimbisa kuti mumwe nomumwe anogona kuvhurwa munguva yakaoma.
Kubatana pamwe chete uye zvinodiwa. Zvakanaka paunenge wakafara uye uchifambidzana nomumwe nemumwe, kurudyi? Kuita zvinhu zvinowanzodiwa uye zvinodiwa, semafungiro akawanzana pamusoro pehupenyu, kusimbisa chero mapeji.
Mashoko e rudo uye kubata. Usakanganwa kutaurirana pamusoro pemanzwiro ako nekuchengetedza kusangana kwenyama. Garai pamwe chete kakawanda!
Upenyu hwakazara hwepabonde. Usazvidza unhu hwepabonde, nokuti hutano hwakanakisisa - imwe yezvidhina zvehukama huri nani. Kuenzanisa zvinotyisa mumubhedha, chido chokupa uye kufara - ndicho chakanyanya kukosha muhukama hwepabonde hwevakaroorana.
Nyaya dzakanaka. Haisi nezveimba yepamusoro uye yekushambadzira motokari. Zvakakosha kuti pfungwa dzako pamusoro pehupenyu huve hwakakwana, nokuti havasi vaviri vari vaviri vanobvumirana neimba yeparadhiso, kunyange zvazvo fuma yose inodiwa nevose.
Zvirongwa zvinowanzoitika zvemangwana zvinopa chivimbo kune mumwe nemumwe, mune ramangwana. Simbisa chimwe chinhu. Vanopa rusununguko. Bhuku rakanyatsogutsikana richadzivisa zvido zvekuda, kuziva kuti zvakakosha zvikuru kuti mudzimai wake avake mhuri yakasimba. Uye, zvakare, murume akagadzirira kuva neukama hwakakomba, anogona kudonha maoko ake kubva pakuziva kuti shamwari yake ine mhepo uye ine simba.
Kuti uuye nevarume vako vari pedyo nekanaka, taura nemwoyo wose mubvunzo: ndiani waunoda kuita izvi? Kana shanje revamwe - ipapo urongwa hwako huchaparadzwa kukundikana. Kwete nguva dzose ukama hwakanaka hunofanana nehwekunze, nekutora chikwangwani chekuparidzira kune hama neshamwari, iwe unoshaya nguva inogona kushandiswa pakuisa nheyo dzehukama hwakanaka. Zvakakosha kuziva kuti hukama hwakanakisisa basa rakagadzikana. Ita kuti adikanwe, inakidzwe kubudirira uye kuvaka basa rakanaka kune vose vakanakisisa!
Unonzwisisa sei kuti unoda?
Nzira yekuita sei mukomana achitsvoda?
Chokwadi chinofadza pamusoro pevarume
Rudo rusina kufanirwa - chii chaunofanira kuita?
Ukama hwakasununguka - chii ichocho uye kana uchibvumirana nazvo?
Nzira yekuwana munhu sei?
"Mwanakomana wamai" muhukama - mufananidzo wepfungwa
Nzira yekudzorera sei munhu wekare, kana ane musikana?
Munhu akakodzera - chii chaanofarira?
Nzira yekurega sei kuda murume?
Anorumbidzwa kune munhu anodiwa
Nzira yekuwana sei murume kubva mubhizimisi rwendo?
Ndeapi mararamiro anoita varume?
Matombo eKana Mukadzi
Rudo rusina kukodzera - mararamiro aungaita marwadzo anorwadza, asingadiwi?
Cupcake with jam
Pasi rinovhara kicheni
Sutu yakasviba yakasviba - neikupfeke uye yekugadzira mufananidzo wakaita sei?
Shoes for women's winter park
Jumpu jamu - mapeji okutanga emuviri wekudya wakasvibirira
Zvimedu zve jeans
Calceolaria kubva kumbeu
Style swag yevasikana
Mafuta anokosha kubva kumumhutu
Scarlet fever muvana
Iwe unoziva sei kana mwana wako atanga?
Vakadzi vane jekete pasi nehuto
Zita rei Leonid
Kuita mapikicha kubva kune 1 gore
Adaptogens yemiti yakabva